रिचार्जरमा कोरोना प्रतिरोधात्मक जुस किन्दा १० थान के एन ९५ मास्क सित्तैमा ! - Lokpath Lokpath
२०७७, १४ असार आईतवार २२:५९
रिचार्जरमा कोरोना प्रतिरोधात्मक जुस किन्दा १० थान के एन ९५ मास्क सित्तैमा !
प्रकाशित मिति : २०७७, १४ असार आईतवार २२:५९
काठमाडौं । मोबाइल एप रिचार्जरले कोरोना प्रतिरोधात्मक जुस किन्दा १० थान के एन ९५ मास्क सित्तैमा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
आफ्ना प्रयोगकर्तालाई लक्षित गर्दै रिचार्जरले यस्तो अफर ल्याएको जनाएको छ । रिचाजर्रले यही असार १६ गते मंगलबार दिउँसो २ बजे देखि ३ बजेसम्म एक घण्टाको अवधिमा कम्तिमा १० बोत्तल भिटामिन सी युक्त डबल सी ब्रान्डको जुस अडर गर्नेहरुलाई निशुल्क मास्क उपलब्ध गराउने भएको हो ।
उक्त सेल अवधिमा जुस अडर गर्दा रिचार्जरका प्रयोगकर्ताले एक हजार क्यास प्वाइण्ट भने रिडीम गर्नुपर्ने हुन्छ । रिचार्जरको मोबाईल एप डाउनलोड गरि खाता सञ्चालन गर्ना साथ एक हजार क्यास प्वाइण्ट पाईने रिचार्जरले जनाएको छ । साबिकका प्रोयोगकर्ताको हकमा खातामा सञ्चित रहेको क्यास प्वाइण्ट रिडीम गरेर जुस किन्दा मास्क निशुल्क पाईने ग्लोबल कि टेक्नोलोजीका अध्यक्ष अलाइभ ग्लाईडरले बताए ।
‘अहिले बजारमा १० ओटा मास्कको मूल्य नै एक हजार रुपैया भन्दा धेरै पर्छ । त्यहि भएर थाईल्याण्डमा उत्पादित उच्च गुणस्तरको इम्युनिटि बुस्टर जुस किन्दा मास्क सित्तैमा दिन लागेका हौं’ अलाईभ ग्लाइडरले भने । यो अफरमा आउने अर्डरको डेलिभरी ढिलोमा ४८ घण्टामा गरिसक्ने रिचार्जरले जनाएको छ । मोबाइल, ल्यापटप तथा इलेक्टोनिक ग्याजेटेस्हरु भने अर्डर गरेको २४ घण्टा भित्रमा डेलिभरी हुनेछ ।
रिचार्जरले घर, पसल, अफिस, बैंक तथा वित्तीय संस्था, होटल लगायत सबै क्षेत्रको लागि कोभिड १९ का सुरक्षा उपकरणहरु समेत सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
जतिको रिचार्ज गर्यो त्यति नै क्यास प्वाइन्ट पाइने रिचार्जरले बीमा, बिजुली, इन्टरनेट, टिभी लगायतका सेवाको महसुल भुक्तानी गर्दा पनि २० प्रतिशत क्यास प्वाइन्ट दिन्छ । यसरी उपलब्ध हुने क्यास प्यान्टलाई सामान किन्दा छुटको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
भाइबरले शुरु गर्‍यो स्थानीयकृत युजर इन्टरफेस
काठमाडौं । नेपालमा राकुटेन भाइबरले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरुका लागि नयाँ युजर इन्टरफेसको शुरुवात गरेको
धितोपत्र बजार नेप्सेमा सामान्य वृद्धि
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज ५.०४ अङ्कले उकालो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलवार सुनको मूल्यमा कमि आएको छ । सोमवार प्रतितोला
फेरी बढ्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी
सपनामा खाएको देख्नु शुभ कि अशुभ ?
खन्ने क्रममा भेटिए ६०० वटा बहुमूल्य मुगलकालीन सिक्का !
घुससहित उद्योग अधिकृत ओली पक्राउ
कोरोना अपडेटः यस्तो छ विश्वमा संक्रमणको पछिल्लो अवस्था
कोरोना संक्रमणको हिसाबले नवौँ देश बेलायतमा यस्तो महामारीको अवस्था
कोरोना भाइरसविरुद्धको पहिलो 'भ्याक्सीन' किन्न पाइने मिति तोकियो
मंगलवार काठमाडौं उपत्यकामा थपिएका कोरोना संक्रमित सबै काठमाडौंका
प्रधानमन्त्री ओलीको विवादास्पद अभिव्यक्ति : भाजपाद्वारा निन्दा, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि
प्रधानमन्त्री ओलीले राम र अयोध्याबारे दिएको अभिव्यक्तिमा भीम